Allgedo.com » 2013 » February » 20
Home » Archive Daily February 20th, 2013
Madaxweynaha Sierra Leone Ernest Bai Koroma, ayaa shaaca ka qaaday in wadankiisa uu qeyb weyn ka qaatay nabad ku soo dabaalida dalka Soomaaliya iyo hormarka iminka laga dareemayo Magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka. Madaxweynaha Ernest Bai Koroma oo ciidamo badan oo kuwa ammaanka ah kula hadlayay gudaha dalkiisa ayaa hoosta ka xariiqay islamarkaana ciidamadiisa ku amaanay sida wacan ee kaga qeyb...
Ciidamada Ethopia iyo kuwa Soomaaliya oo ku sii siqaya Degmada Diinsoor ee Gobolka Bay
Wararka laga helayo Degmada Diinsoor ee Gobolka Bay ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ay shalay gelinkii dambe la wareegeen deegaano ka tirsan Magaalada Baydhabo iyo Diinsoor. Sida ay sheegayaan wararka howl galkan oo ka bilowday duleedka Baydhabo ayaa ciidamada huwanta ugu suura gashay inay dagaalo kula galaan tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada Baydhabo. Col. Xasan Isaaq Cumar...
Qoysaska shan Kenyaan ah oo gacanta ugu jira Al-Shabaab, ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay kula hadlayaan Al-shabaab oo ku aadan wiilashooda oo gacanta ugu jira Al-shabaab, islamarkaana la kulmaya baqdin dhanka nolosha, maadaama horay Al-Shabaab hanjabaad u jeediyeen. Wargeysyada ka soo baxa dalka Kenya ayaa si weyn wax ugu qorayay warkaan oo ku aadan in qoysaska shan Kenyaan oo Al-shabab haystaan...
Saraakiisha ciidamada AMISOM ee Gobalka Hiiraan ayaa shaaca ka qaaday inay heshiisiiyeen beelo walaalo ah oo wada daga deegaano ka tirsan Gobalka Hiiraan. Sida uu warbaahinta usheegay taliyaha ugu sareeya ciidamada Jabuuti ee Gobalka Hiiraan Cusmaan Dubad beelahaan ayaa muddo colaad ay ka dhaxeysay kuwaasi oo kuwada nool Gobalka Hiiraan. Taliye Dubad ayaa sheegay inay ciidamada AMISOM usuuragashay...
Maxkamada Gobalka Banaadir ayaa maanta waxaa ka bilaabanaysa dhageysiga dacwada wariye Cabdicasiis Koronto iyo sidoo kale haweenaydii sheegtay in la kufsaday. Sida uu sheegay Abukaate Maxamed Maxamuud Afrax oo ka mid ah qareenada u doodaya kiiska wariye C/casiis Koronto dhageysiga dacwada ayaa maanta dib u bilaabmeysa iyadoo la eegayo racfaankii dhawaan maxkamada Gobalka ay ka qaateen kiiska wariyaha...